Caqabadaha Muga & Miisanka Leh Ee Ku Hor Gudban Hanaanka doorasho Ee Hirshabeelle… | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Caqabadaha Muga & Miisanka Leh Ee Ku Hor Gudban Hanaanka doorasho Ee...
Caqabadaha Muga & Miisanka Leh Ee Ku Hor Gudban Hanaanka doorasho Ee Hirshabeelle…
Hirshabeelle waxay isku diyaarineysaa doorasho cusub & dib u dhis ka baaxad weyn tii hore, iyadoo durbadiiba ay kala shakiyeen beelihii wax isku darsaday afar sano ka hor.
Maamulkaan ayaa noqday mid fadhiid ah kadib afar sano & labo madaxweyne oo salsanada maamulkooda dhaafin waaye Jowhar, iskaba daa meelo kale xitaa maareyn waaye amniga caasimadooda.
Hirshabeellada afar sano jirsatay waxa ay noqote maamul aysan ka jirin mashaariic wax ka bedela hanaanka dhaqan dhaqaale ee bulshada, amninigii oo faraha ka baxay madama tiro badan oo isugu jira wasiiro & xildhibaano lagu dhex qaarijiyay gudaha maamulkaas.
Caqabadaha ugu waa weyn ee ku hor gudban maamulkaan waxaa kamid ah, kuwa ay karkarineyso Villa Somalia, damaca Waare, xusul duubka Guudlaawe & sadbursiga beelaha.
Qorshaha qarsoon ee Villa Somalia
Villada ayaa iminka wax go’aanka ah ka gaarin shaqsigii ay u xulan lahayd Hirshabeellada cusub madaama ay kaga mashquushe arimo ay mid ahaayeen dhameystirkii heshiiskii dhuusamareeb & soo xulista ra’isul wasaare la jaanqaadi kara marxalada iminka uu dalka marayo, isla markaana fulin kara heshiisyada horyaala dowladda waqtigeeda sii dhamaanaayo.
Walow la sheegayo in ay ka fikirayaan sidii ay jalaafo ugu dhigi lahaayeen siyaasiyiinta mucaaradka ee u xusul duubaya in ay isku soo sharaxaan doorashada Hirshabeelle sidii hore uga dhacday Galmudug.
Damaca Madaxweyne Waare
Dad badan oo taxliiliya arimaha siyaasada Soomalia ayaa durbadiiba ku micneeye warqadii dhawaan uu soo saare madaxweyne Waare ee uu ku diide jadwalka hanaanka doorashada Hirshabeelle oo ay soo saareyn guddi uu isaga qudhiisa magacaabay in ay tahay mid uu ku doonayo inuu door weyn ku yeesho go’aanka xuliska xildhibaanada heer Federal.
Waare ayaa raba sida ay sheegeyn siyaasiyiinta qaar in uu kursiga sii joogo ilaa & meel ay kaga dhaceyso doorashada dhawaan la filayo in guud ahaan Soomalia ay ka dhacdo dhamaadka sanadkaan 2020 ilamaa horaanta sanadka 2021.
Xusul duubka Guudlaawe
Cali Guudlaawe oo haatan ah madaxweyne ku xigeynka Hirshabeelle ayaa sanadkan aad ugu hanqal taagaya kursiga madaxweynenimo, isagoona garab & taageero xoogan ka helaaya Fahad Yasiin oo ah sarkaal galaangal & saameyn mug & miisanba ku dhex leh masiirka arimaha soomalia waqti xaadirkan.
Aas-aaskii maamulka Hirshabeelle ee 2016-kii waxaa jiray gadood weyn oo ay qabtay beesha ugu dambeyn lagu qanciyay in ay qaataan madaxweynaha maamulkan, kadib markii waxgaradka reer Baladweyn si weyn uga biyo diideyn in reer Jowhar la isugu daro caasimada & madaxweynaha.
Walow haatan dib loogu laabtay doodii laga soo gudbay afar sano ka hor, kadib markii beesha caasimada ay mar kale bilawday doodo la xiriira arintaan, iyadoona raajicineysa in wax uun isbedel ah lagu sameeyo heshiiskaas isafgaradka ahaa balse aan ahayn mid dhigaal ah.